2 Mpanjaka 3 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alemà any Pennsylvanie Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Karo) Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Galicienne Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Javaney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kosrae Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Motu Myama Navajo Nias Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Pendjabi Pendjabi (Romanina) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Alemà Soisa Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Aotrisianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Frantsay Belza Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Irlandey Tenin’ny Tanana Israelianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Jamaikanina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kenianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Nizerianina Tenin’ny Tanana Orogoayanina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Slovenianina Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Zambianina Tenin’ny Tanana any Singapour Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Salvadaoro Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Ticuna Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Mpanjaka Faharoa 3:1-27
Jorama, mpanjakan’ny Israely (1-3)
Nikomy tamin’ny Israely i Moaba (4-25)
Resy i Moaba (26, 27)
3 Lasa mpanjakan’ny Israely tany Samaria i Jorama+ zanak’i Ahaba, tamin’ny taona faha-18 nanjakan’i Josafata mpanjakan’ny Joda. Ary nanjaka 12 taona izy. 2 Nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah foana izy, nefa tsy hoatran’ny nataon’ny rainy na ny reniny. Mba nesoriny mantsy ilay tsangambato masin’i Bala, izay nataon-drainy.+ 3 Nikiry nanao ny fahotana, izay nataon’ny Israely noho ny fitaoman’i Jeroboama zanak’i Nebata, anefa izy.+ Tsy niala tamin’izany izy. 4 Mpiompy ondry i Mesa mpanjakan’i Moaba. Ary nandoa hetra ho an’ny mpanjakan’ny Israely foana izy, dia zanak’ondry 100 000 sy ondrilahy 100 000 mbola tsy nohetezana. 5 Raha vao maty anefa i Ahaba,+ dia nikomy tamin’ny mpanjakan’ny Israely ny mpanjakan’i Moaba.+ 6 Niala avy tany Samaria àry i Jorama Mpanjaka, tamin’izany andro izany, ka novoriny ny Israely rehetra. 7 Naniraka olona ho any amin’i Josafata mpanjakan’ny Joda koa izy, mba hilaza hoe: “Mikomy amiko ny mpanjakan’i Moaba. Koa hiaraka amiko hiady amin’i Moaba ve ianao?” Dia hoy i Josafata: “Handeha aho.+ Hoatr’anao ihany aho! Ny vahoakako dia vahoakanao ihany, ary ny soavaliko dia soavalinao ihany.”+ 8 Nanontany izy avy eo hoe: “Avy aiza isika no hiakatra?” Dia hoy i Jorama: “Avy any an-tany efitr’i Edoma.” 9 Niainga àry ny mpanjakan’ny Israely sy ny mpanjakan’ny Joda ary ny mpanjakan’i Edoma.+ Nanodidina izy ireo, ary rehefa avy nandeha lalana fito andro, dia tsy nisy rano intsony ho an’ny tafika sy ho an’ny biby fiompy izay nanaraka azy ireo avy tao aoriana. 10 Koa niteny ny mpanjakan’ny Israely hoe: “Loza ity! Ny handresen’i Moaba antsika mpanjaka telo ireto mihitsy no niantsoan’i Jehovah antsika!” 11 Dia hoy i Josafata: “Tsy misy mpaminanin’i Jehovah azontsika asaina manontany an’i Jehovah angaha eto?”+ Namaly àry ny lehilahy iray mpanompon’ny mpanjakan’ny Israely hoe: “Ao i Elisa+ zanak’i Safata, ilay mpanondraka rano ny tanan’i Elia.”*+ 12 Dia hoy i Josafata: “Izy no itenenan’i Jehovah.” Nidina nankany aminy àry ny mpanjakan’ny Israely sy Josafata ary ny mpanjakan’i Edoma. 13 Hoy i Elisa tamin’ny mpanjakan’ny Israely: “Fa inona no hankanesanao atỳ amiko?*+ Mandehana any amin’ny mpaminanin-drainao sy ny mpaminanin-dreninao.”+ Hoy anefa ny mpanjakan’ny Israely: “Aza miteny an’izany ianao, fa i Jehovah no niantso anay mpanjaka telo ireto mba ho resin’i Moaba.” 14 Dia hoy i Elisa: “Raha mbola velona koa i Jehovah Tompon’ny tafika izay tompoiko,* dia tsy ho nijery anao na ho niraharaha anao+ akory aho raha tsy noho ny fanajako an’i Josafata+ mpanjakan’ny Joda. 15 Akao mpitendry harpa*+ àry aho.” Raha vao nitendry harpa ilay mpitendry, dia tonga tamin’i Elisa ny fanahin’i* Jehovah.+ 16 Dia hoy izy: “Izao no lazain’i Jehovah: ‘Asio tatatra be dia be eto amin’ity lohasaha* ity, 17 fa izao no tenin’i Jehovah: “Tsy hahita rivotra na orana ianareo, nefa ho feno rano ity lohasaha* ity,+ ka izay no hosotroinareo sy ny biby fiompinareo ary ny biby hafa anananareo.”’ 18 Tsotra kely amin’i Jehovah+ anefa ny manao an’izany, satria na i Moaba koa aza hataony resinareo.+ 19 Tafiho ny tanàna voaro mafy+ rehetra sy ny tanàna tena tsara rehetra. Kapao ny hazo tsara rehetra, ary tampeno ny loharano rehetra. Anipazo vato+ koa ny tany tsara rehetra mba tsy hamokatra.” 20 Rehefa maraina ny andro, tamin’ny fotoana fanolorana fanatitra varimbazaha,+ dia nisy rano tonga tampoka avy any amin’ny faritr’i Edoma, ka feno rano ilay tany. 21 Henon’ny Moabita rehetra fa niakatra hiady taminy ireo mpanjaka ireo. Novorin’izy ireo àry ny lehilahy rehetra afaka mitondra fitaovam-piadiana,* dia niandry teo amin’ny sisin-tany izy ireo. 22 Rehefa nifoha maraina ny Moabita teny ampita, dia efa notarafin’ny masoandro ny rano, ka mena hoatran’ny ra no fahitan’izy ireo an’ilay izy. 23 Dia hoy izy ireo: “Ra io! Tena nifamono tamin’ny sabatra ireo mpanjaka, koa andao haka babo,+ ry Moaba ô!” 24 Rehefa niditra tao amin’ny tobin’ny Israely anefa izy ireo, dia nitsangana ny Israelita ka namely azy. Nandositra+ azy ireo àry ny Moabita. Ny Israelita kosa nandroso hatrany Moaba, ka sady nandeha izy ireo no namono an’ireo Moabita. 25 Dia noravany ireo tanàna. Ary samy nanipy vato teny amin’ny tany tsara rehetra ny olona tsirairay, ka nofenoiny vato ireny. Notampenan’izy ireo koa ny loharano+ rehetra ary nokapainy ny hazo tsara rehetra.+ Ny manda vato tao Kira-haresa+ sisa no tsy rava, ary nohodidinin’ireo mpampiasa pilotra ilay tanàna ka notafihiny. 26 Hitan’ny mpanjakan’i Moaba fa resy izy, ka nitondra 700 lahy mpampiasa sabatra izy mba hanavatsava hankany amin’ny mpanjakan’i Edoma.+ Tsy nahavita an’izany anefa izy ireo. 27 Nalainy àry ny zanany lahimatoa, izay tokony hanjaka handimby azy, ka natolony ho fanatitra dorana+ teo ambony manda. Ary tezitra be tamin’ny Israely ny miaramila, ka tsy nanafika azy intsony fa niverina tany amin’ny taniny.
^ Na: “ilay mpanompon’i Elia.”
^ Abt: “Inona no ho ahy sy ho anao?”
^ Abt: “izay eo anatrehany no itsanganako.”
^ Na: “mpitendry zavamaneno.”
^ Abt: “tanan’i.”
^ Na: “lalan-driaka.”
^ Na: “izay rehetra nanao fehikibo.”
2 Mpanjaka 3